Adoontii Caanka Noqotay ! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Adoontii Caanka Noqotay !
Adoontii Caanka Noqotay !
Waxay ku dhalatay Boqoradda Hurrem magaalo ku taalla galbeedka dalka Ukrain sanadkii 1500 , Ciidamadii Tartaarka ayaa magaaladii ay deganayd soo weeraray ka dibna way soo qafasheen waxayna jaariyad ahaan uga iibiyeen boqorkii Cusmaaniyiinta Boqor Sulaymaan Qanuuni. Waxay ka mid ahayd hablihii u shaqaynayay boqorka, iyadoo markii danbe si gaar ah iyadu ugu shaqayn jirtay Magaceedu waxa la odhan jiray Iskadar waxaana ka bedelay oo u bixiyay Hurrem boqor Sulaymaan. markii danbe waxa guursaday boqorka oo ay u dhashay 6 caruur ah, waxayna noqotay boqorada.
Inkasta oo eedo badan loo soo jeediyo oo ah inay ka danbaysay dilal xididka boqorka haddana waxay noqotay jaariyadii keliya ee noqotay boqorad madaama u si sharci ah u guursaday Boqor Sulaymaan oo Cusymaaniyiinta xukumayay. Waxaana la odhan jiray jaariyaddii Ruushka ahayd ee uu jeclaaday boqroka Sulaymaan. Waxaa kale oo loo yaqaana kariimi iyo Umu Muxamed.
Waxaya dhistay masaajido badan iyo Isbitaal dumarka gaar ah oo ku yaalla Istanbul, madaaris, iyo laba xarumood oo raashinka lagu diyaarin jiray oo ku yaalay Maka iyo Qudus. Waxay dhimatay sandakii 1558. .( Source : Almrsal.Com)
Previous articleXuquuqda Bulshadu Isku Leedahay
Next articleCiidamada Ammaanka Gobolka Sanaag Oo Qabtay Dad Si Sharci Daro Ah U Dhuxulaysanaayay